Kelly Blue Book ရဲ့ “Lowest Cost to Own Award” ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ 2018 Nissan Leaf! – AutoMyanmar
Kelly Blue Book ရဲ့ “Lowest Cost to Own Award” ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ 2018 Nissan Leaf!
လက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရောင်းအားအကောင်ဆုံး လျှပ်စစ်ယာဉ်အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ 2018 Nissan Leaf ဟာဆိုရင်တော့ Kelly Blue Book ကပေးအပ်တဲ့ “Lowest Cost to Own Award” ကို 2018 Chicago Auto Show မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Kelly Blue Book အနေနဲ့ “Lowest Cost to Own Award” ကို ၅ နှစ်သာကာလအတွင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်က ယာဉ်အပေါ်ကုန်ကျတဲ့စရိတ် အပေါ်ကိုလိုက်ပြီးချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်ကလည်းနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ယာဉ်ဖြစ်ရပါမယ်။ ယာဉ်အတွက်ကုန်ကျတဲ့ ဓာတ်ဆီဖိုး၊ ပြုပြင်မွမ်းမံဖိုး အစရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို အကုန်ကြည့်ပြီးပေးတဲ့ဆု တစ်ခုပါ။
အခုရရှိသွားတဲ့ 2018 Nissan Leaf ဟာတော့ အရင်လကမှစတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖန်တီးထားတဲ့ Second generation (Nissan 2018 Leaf S) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Leaf အသစ်လေးမှာတော့ Nissan’s Intelligent Mobility ကိုရုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့ ProPILOT Assist, e-Padal, Automatic Emergency Braking အစရှိတဲ့နည်းပညာပါဝင်ပါတယ်။ နည်းပညာတွေက လန်းနေသလို လုံခြုံမှုကိုလည်း အရင်ကထက်အများကြီးပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် 2018 Nissan Leaf တွေမှာတော့ Nissan Leaf S အပါအဝင် Nissan Leaf SV, Nissan Leaf SL ဆိုပြီး ၃ မျိုးထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Nissan Leaf S ဟာ $29,990 ရှိပြီးစျေးအနည်းဆုံးနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Leaf S, SV, SL ၃ ခုလုံးမှာ Leaf S က feature တွေအကုန်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ S က Feature တွေအပြင် SV မှာ Intelligent Cruise Control, Apple CarPlay, Android Auto အစရှိတာတွေပါဝင်မှာပါ။ SL မှာတော့ Bose® Premium audio system, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Intelligent Around View Monitor အစရှိတဲ့ အပို feature တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Nissan ဟာ 2018 Chicago Auto Show မှာပဲ “Consumer Guide Automotive’s Best Buy” ဆုကို Rogue နဲ့ Rouge Sport တို့နဲ့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကတော့ Automyanmar ရဲ့နောက်ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာပါဝင်လာမှာပါ။